Anarana simika: Chlorine Dioxide singa iray vovoka.
Properties: diôdômanina klôlônia Ny vovo-dronono iray dia vovoka azo entina, tsy mipoaka avy amina singa iray izay, rehefa ampiana rano iray manokana, dia mihetsika tanteraka amin'ny vahaolana diôzida klôlôida maharitra maharitra.
Anarana simika: Chlorine Dioxide Powder Kit / chlorine dioxide kitapo roa singa
Properties: Kitapo vovo-dronono kôlorômazy dia kitapo vovoka tsy azo esorina amin'ny singa roa izay, rehefa ampiana rano iray manokana, dia mihetsika tanteraka amin'ny vahaolana diôzida klôlôida maharitra maharitra.
Chlorine Dioxide (ClO2) Sachet dia vokatra mpamatsy klôro dioxide hampiasaina ho toy ny deodorizer sy ny fofona manala. Ny vovoka manokana dia velomina ao anaty sachet. Rehefa tratry ny hamandoana amin'ny rivotra dia mamokatra entona klôro dioksida ny sachets hanimbana ny fofona tsy mahafinaritra sy tsy ilaina amin'ny loharanony.
Ny Sterilizing Gel dia diôzida klôlôzika miorina, fitaovana famoahana maharitra maharitra. Ahitana vovo-paosy iray ary tavoahangy manafaka. Ampio fotsiny ny vovoka anaty rano ao anaty tavoahangy mamoaka, minitra vitsy taty aoriana dia niforona ny gel. Avy eo, manomboka mamoaka entona klôro dioksida ho an'ny tontolo iainana. Ny Sterilizing Gel dia azo ampiasaina ho fanadiovan-drivotra sy deodorizer ho an'ny fifehezana fofona sy biolojika amin'ny toerana voafetra, toy ny fiara, vata fampangatsiahana, vata fampangatsiahana, trano, birao, tranomboky, trano fidiovana, efitrano fitehirizana sns.
Size: karazana sy habe isan-karazany
Fampiasana: famonoana afo, fandrendrehana volamena, fitsapana vy tena sarobidy
Material: Ceramic Alumina, Ceramic Alumina, Clay
Size: 20g / 30g / 40g / 45g / 50g / 55g / 65g / 75g